Navy Blue Bedroom Eyelet Thermal Insulated Room Maizina Lamba, China Navy Blue Bedroom Eyelet Thermal Insulated Room Maizina Lamba Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Model Number: tafika an-dranomasina
EFFECT GREAT & PREMIUN QUANLITE - .Ny lamba mihitsy no iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra manerantany. Miaraka amin'ny endrika kanto, manome rivo-piainana milamina sy mampahazo aina ny efitrano. Ny fitaovana dia 100% polyester, afaka manakana ny hazavana 85% -93% sy ny taratra UV. Afaka manome ambiance tony ao amin'ny efitrano izy io ary mamorona tontolo matory tonga lafatra miaraka amin'ireo lambam-baravarana maizimaizina sy mihaja.
FANAZAVANA Jiro & FAMPIANARANA THERMAL MAIKA - Izy ireo dia lambam-baravarana mainty na lambam-baravarana. Ny lanjan'ny lamba dia 200gsm ka hatramin'ny 320gsm. Tena malefaka izy ireo ary mahafinaritra ny manohina. Fanampiny tonga lafatra ho an'ny efitrano fandriana, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano ho an'ny ankizy sns. Fitaovana voafantina kalitao, tsy misy hems tsy mitovy, ary fifehezana kalitao henjana ho an'ny traikefa vokatra tsara kokoa. Raha aseho ny valin'ny asa, ny lambam-baravarana dia afaka mampihena ny tabataba 10-15%. Tsy ho zakanao ny kiririoka sy ny siotsiakan'ny mpiara-monina. Tena tsara ho an'ny torimaso, indrindra ho an'ny zazakely.
Polyester 100%. Fitaovana sy loko mitovy miverina amin'ny eo aloha. Masinina azo sasana ambanin'ny 30 degre. Aza misalasala mifandray aminay raha manana fanontaniana hafa ianao.
Namboarina avy amin'ny lamba Super Soft 100% kalitao avo lenta (Polyéster, Import). Ny lambam-baravarana mainty misy pensilihazo dia mateza ary mahafinaritra ny mikasika. Sakafo 85-95% ny tara-masoandro sy ny taratra UV (Ny loko maizina dia miasa tsara kokoa) miaraka amin'ny teknolojia fanenomana telo. Mampihena ny alokaloka maivana sy ny tabataba ho an'ny fiainana manokana sy ny torimaso tsy manelingelina. Mampihena ny tabataba amin'ny ambaratonga iray. Rehefa mijanona miaraka amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana, ny ridao dia hanome toerana manokana ary hiaro ny fiainana manokana.
Volana farany vita amin'ny kofehy vita amin'ny polyester ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny
HF29016 volom-boasary volon'osy ambaratonga voninkazo namboarina
White Embroidered Sheer Curtain Grommet - Drafitra ravina voninkazo sy fiarovana ny fiainana manokana 8348 pirinty